Xildhibaanada Puntland | allsanaag
Ma Tuugtii aynu ogayn ayaa dad kala saaraya?
Inta badan 66 Xildhibaan ee Baarlamaanka Puntland waa danaystayaal. Tuug, dib u socod iyo qabiilaystayaal aan dan ka lahayn jiritaanka Puntland iyo Bulshadeeda
Xildhibaanada Puntland intii ay Puntland soo jiratay ma dhicin maalin ay la xisaabtameen madaxweynayashii hogaanka soo qabtay oo had iyo jeer ahaa kuwa qardajeexayey. Laakiinse waa la arkay madaxweyne la xisaabtamaya wasiiradiisa.
Tusaale hadaan u soo qaadano Cabdi ( maaha magaciisa dhabta ah), wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada Puntland ee beesha Dhulbahante ilaa sanadkii 1998 Intuu xilka hayey wuxuu laaluush kaga qaatay inuu doornayo Afar madaxweyne oo Puntland soo maray. Doorashadii ugu danbaysay gogol garnaqsi ayaa loo dhigtay, ka dib markii la ogaaday inuu lacag ka wada qaatay labadii Murashax oo kala ahaa madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Gaas oo u tartamayey hogaanka Puntland
Sidoo kale wuxuu laaluush ku qaatay inuu kursiga ka tuurayoo ama mooshin ka keeno Sadex gudoomiye baarlamaan oo soo maray gudoonka Baarlamaanka Puntland oo ay is qabteen madaxweynihii markaa xilka hayey. Laaluushkii ugu danbeeyey wuxuu ahaa markii madaxweynaha PuntlanCabdiweli Gaas uu sida sharci darada ah laaluushka ugu bixiyey in kursiga laga tuuro gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire. Xildhibaankami maalin kama bixin Garowe oo ma soo booqan bulshaddi uu magacooda ku fadhiyo baarlamaanka Puntland
Cali waa Xildhibaan kale oo ka mid ah tuugta sheegta inay yihiin Xildhibaanada Puntland. Wuxuu baarlamaanka Puntland ka mid noqday 1998, wuxuu ka soo jeedaa beesha Majeerteen. Maalintii Faroole iyo Ilkojiir tartamayeen wuxuu u xilsaarnaa abaabulkii Xildhibaanada iyo in Ilko jiir ku fariisan kursiga sare ee Puntland . Sadex mar baarlamaanka Puntland wuxuu hor keenay mooshin lagu tuurayey gudoomiyihii baarlamaanka ee waqtigaas xilka hayey isaga oo mar walba la safnaa madaxweynaha markaa joogay oo ay beesha ka soo wada jeedaan.
Xildhibaanada Puntland ee gobolka Sanaag ee beesha Warsangeli iyaga waxa loo adeegsadaa sida Makalinta ( waa jilibka lagu soo dabto Kaluunka marka la jilaabanayo), Gudoomiye kasta oo ka soo jeeda gobolka Sanaag oo howl shaqo ay isku qabtaan madaxweynaha Puntland waxa loo adeegsadaa Xildhibaanaada Warsangeli . Mid ka mid ahna waxa loo balan qaadaa oo dhegta loogu sheegaa in isagu xilka gudoonka qabanayo. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ee hadda jooga sidan ayuu ku yimid maanta haddii uu ka hadlo sababta beesha Warsangeli hal kursi uga heleen Aqalka sare halkii Siciid Xasan Shire ayuu mari doonaa oo 33 Xildhibaan ee ka soo jeeda beesha Majeeteen ayaa kursiga ka tuuraya ilaa waa baarlamaan aan caddalad lahayn oo faraq wayni u dhaxeeyaan saamiga ay beeluhu ku leeyihiin.
Tusaalaha ugu danbeeya Mahad Cawad oo ka soo jeeda beesha Dir oo aan hal xildhibaan ku lahay baarlamaanka Puntland iyo Moorgan oo beeshiisa Majeerteen baarlamaanka Puntland ku leeyihiin 33 Xildhibaan ayaa wada tartamaya, caddaalada laga sugayaa in Mahad Cawad uu ku soo baxo doorasho ka dhacda Baarlamaanka Puntland oo xalaal ah waa dhalanteed iyo been laga sheegayo dimoqraadiyadda
Ugu danbayntii Tuugtii aynu ogayn ee Baarlamaanka Puntland fadhiday oo dhowaan laaluushka ku qaatay inay gudoomiyahoodii kursiga ka tuuraan, Maantana laaluush kii la mid ah ayeey qaadanayaa oo waxay soo saarayaan Xildhibaano ay qaab qabiil ku soo doortaan 33 Xildhibaan ee halka beel ka soo wada jeedaa iyo midka beelaha kale oo ay ku dooran doonaan inta lacag ah oo uu jeebka ugu shubo. Aqaka sarena Puntland waxa ka aadi doono waa dhalaankii tuugta baarlamaanka Puntland fqadhida
← Barnaamij Gaar ah Dhismaha Wadada Ceeldaahir Caalamku Dumar ayeey u baahan yihiin →